नेपालमै हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ पढाइ सुरू हुँदै « Clickmandu
नेपालमै हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ पढाइ सुरू हुँदै
प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७३, बुधबार ०८:५६
काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको पढाइ सुरू हुने भएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले पहिलो पटक स्‍नातक तहमा यस्तो पढाइ सुरू गर्न लागेको हो । विश्वविद्यालयको सुर्खेत स्थित केन्द्रिय इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा यसको पढाइ हुने भएको छ ।
धमाधम निर्माण हुन लागेका जल बिद्युत् आयोजनामा ठुलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति माग हुने देखिएको छ । ‘प्रशस्त सम्भावना देखेर नै विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलो पटक यस्तो पढाइ सुरू गर्न लागेको हो ।’ विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपकुलपति प्रा डा उपेन्द्र कोइरालाले भने ।
पहिलो वर्ष ४८ विद्यार्थीबाट सुरू गर्ने योजना बनाएको विश्वविद्यालयले विस्तारै संख्या र तह पनि बढाउने बताएको छ । कात्तिक तेस्रो सातादेखि पढाइ सुरू गर्ने योजनामा रहेको विश्वविद्यालयले भदौ ८ गतेदेखि फारम वितरण गर्ने र ११ गते प्रवेश परीक्षा लिइनेछ । परिक्षा सुर्खेत र काठमाडौेंमा एकै दिन हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
कस्ले पाउँछन् पढ्न?
विज्ञान ( फिजिकल वा बायोलोजिकल समूह) मा उच्च मा.वि. , ए लेभल वा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा सकेका विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्ने छन् । ४५ प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याएर पास गर्नेले भने प्रवेश परिक्षा दिन पाउँदैनन् । अन्तिम परिक्षाको नतिजा कुरेर बसेकाले भने पाउने छन् ।
४ वर्षे स्नातक तहको लागि ३ लाख ८४ हजार २ सय रूपैयाँ शुल्क लाग्ने विश्वविद्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । छात्रवृत्ति पाउनेले भने ३९ हजार ६ सय तिरे पुग्छ ।